Ma waxaad tahay qof ka walaacsan waayaan xogta telefoonka marka aad dib u HTC goob warshad ama marka aad telefoon iibsanayso cusub? Si loo badbaadiyo waqtiga iyo in ay ka fogaadaan niyad ah mar kale personalizing telefoonka smart, dib kaliya qalabka HTC aad. Waxaad u baahan tahay in ay dib u aad HTC inay khasaaro mooyee xogta ay sabab u tahay qalad farsamo ama ku takrifal. Waxaad dib kartaa:
By isticmaalaya Manager HTC nidaameed aad dib kartaa ilaa kor ku xusan liiska noocyada xogta si aad u computer oo waxaan iyaga ku badbaadin ee Meyeydaan. Marka waraaqaha, multimedia iyo macluumaad kale waxaa xoojiyaa galay your computer, hadda aad u habayn kartaa oo aad u maareeyaan oo dhan oo iyaga ka mid ah sida halkii aad doonistii. Oo haatan ha u baahan tahay in aad walwasho khasaaraha xogta. Waxaa gebi ahaanba ammaan ilaa iyo dib loo soo celiyo si aad telefoon cusub oo waqti kasta.
Isticmaalka Manager HTC nidaameed la mid ma aha heshiis gadashada ama iibinta hantidaada qaali ah laakiin waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan Manager HTC nidaameed in ay dib ilaa aad telefoon iyo soo celiyo in dib ilaa aad telefoon cusub. Backing ilaa HTC mid aad hawl fudud in la sameeyo la Tababare u hagaagsan HTC:
Ku rakib Manager HTC nidaameed on your computer:
Tababare u hagaagsan HTC waa ay fududahay in la rakibay on your computer dhowr daqiiqo gudahood iyo sidoo kale waa mid aad u fudud in isticmaalka, waxa aanu u baahan tahay wax tababar gaar ah iyo isticmaalka Manager HTC nidaameed xitaa haddii aadan aqoon u leh waxa ay ka hor shaqeeyaan.
i. Tag Web Browser Internet on your computer iyo Booqo "HTC Support Site" in ay soo bixi Manager HTC nidaameed .
ii. Guji "Free Download" badhanka soo bixi rakibayo on your computer.
iii.Now click double on rakibayo Icon iyo raac tilmaamaha shaashadda ku ilaa Manager HTC nidaameed la geliyo on your computer.
Dib Your HTC Mid ka mid ah si aad u computer Isticmaalka Manager HTC nidaameed:
Magacyada Tababare HTC nidaameed ee files raad raac ah oo aad telefoonka kula magacaaga telefoonka.
Talaabada 1: Isku aad HTC Mid ka mid ah in computer adiga oo isticmaalaya USB Port, Manager HTC nidaameed lagu daahfuri doonaa si toos ah.
Waxaad samayn kartaa talaabo Daahfurka Manager HTC nidaameed sidaad doonaysid, inta lagu jiro iyo ka dib markii la rakibey inaad saxdaa uncheck "Open HTC nidaameed qabaal marka telefoonka ah waa ku xiran ". Waqti computer ma ogaan USB xiriir aad waxaa laga yaabaa sababtoo ah debugging xiriir USB telefoonka, waa in aad iska baarto oo u qotomiyey sidii looga baahan yahay.
Talaabada 2: . shaashadda ee Manager HTC nidaameed, Guji "Transfer & kaabta" hoos bogga
Tani waa hab fudud, gaaban oo ammaan ah si ay u gudbiyaan xogta oo dhan si aad u computer isticmaalka mustaqbalka, mar dib waxaa idiin abuuray wareejin karaan xogta si aad telefoon cusub ama telefoon isku mid ah ka dib markii resetting.
Talaabada 3: nooc Data Select in la taageeray in aad Computer.
Under kaabta iyo soo celin doortay in ay u waxaa ka mid ah content Media ee telefoonka dib iyo dooran kartaa in aad mar walba gurmad aad telefoon marka aad u xirmaan your computer. Waxa kale oo aad ka dhigi kartaa lambar sir ah oo ku saabsan gurmad telefoonka aad.
Talaabada 4: . Riix kaabta hadda
xogta telefoonka Waxaad hadda xoojiyaa in your computer, haddii aad rabto in ay ku riday password aad gurmad file, si aad u samayn kartaa adigoo tegaya maamuli doorasho. Mid ka mid ah wax ay tahay in mar kale xusuusteen in aad file kaabta waa magacyo sida magacaaga telefoonka.
Soo Celinta aad HTC Mid ka mid ah kaabta ka Computer isticmaalaya Manager HTC nidaameed:
Qaybta ugu muhiimsan ee Manager HTC nidaameed waa soo celinta gurmad hore si aad telefoon cusub ama la mid ah oo aan qayb ka ah xog muhiim ah shakhsi laga badiyay. Tababare nidaameed HTC ay User interface ka farxiya bixisaa dib u soo celinta gudahood qasabno yar mouse. Waxaan ku liis-tallaabooyinka hoos ku shots screen khuseeya nidaamka. Soo celinta aad HTC mid waa mid aad u fudud, ammaan iyo qorshaha dheer, aad riix oo tababare u hagaagsan HTC sameeyaan tallaabooyinka ay natiijada yaa idiin khayr badan.
Talaabada 1: Isku aad HTC mid si aad Computer:
Waa in aad ku xidhi aad HTC mid si aad u computer isticmaalaya dekedda USB oo mar xiriir ku dhisan yahay Manager HTC nidaameed furi doonaa si aad u fudayd. Hadda waxaad qaadi kartaa talaabooyin dhowr ah ee dib u soo celinta dhamaystiran daqiiqado yar gudahood.
Talaabada 2: Riix "Home" ka dibna on "Transfer & gurmad"
mid HTC celinta la mid tahay raad raac ah oo HTC hal iyo isbedelka waa kaliya mid ka mid click. Marka la xidhiidha la adkeeyey inta aad telefoon iyo your computer, waa in aad guji "Transfer & kaabta" link hoos page guriga iyo waxaad arki doontaa fursadaha qaar ka mid ah sida:
Talaabada 3: Guji "Soo Celinta" hoos "kaabta & Soo Celinta"
waxaad tahay uun u tallaabo hal ka soo celinta aad gurmad hore si aad telefoon cusub, Manager HTC nidaameed ayaa waxaa aad u sahlan in aad badbaadin, maareeyaan iyo aad hore u soo celin taariikhda phone in aad telefoon cusub.
Talaabada 4: Dooro "File kaabta" aad rabto in la soo celiyo si aad telefoon cusub:
In talaabo waa in aad doorato oo kaliya gurmad ah oo aad rabto in aad la soo celiyay ee aad taleefan, file ku yeelan doonaa xogta aad dooratay khudbadiisa inta aad telefoonka, in doorashada waxa aad sidoo kale dooran kartaa doorasho ah, haddii aad rabto in lagu badalo content hadda jira ee aad telefoonka kula soo celiyay content ama aan.
Talaabada 5: Riix "Soo Celinta Hadda" in ay sii wadaan la talaabadan ugu dambaysa ee la soo celinayo.
Hadda Manager HTC nidaameed in aad telefoon cusub oo dib u soo celinta doonaa gurmad aad soo xulay oo waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan horumarka la soo celinayo, mar dib u soo celinta waa maamulaha dhamaystiran HTC nidaameed ku weydiin doona aad inuu ku hore Back up ee computer ama u tirtirto.
1 Tallaabada in kaabta iyo Soo Celinta HTC Isticmaalka Wondershare MobileTrans:
Kale oo kale oo cajiib ah in ay ka fogaadaan talaabooyinka dheer waa Wondershare MobileTrans . Waa codsiga desktop oo ka caawinaysaa in ay xogta ka Phone wareejiyo telefoonka, telefoonka si computer iyo computer si telefoonka. Waxa aan looga baahnayn in mobile labadaba waa inay isku waslad brand, iyadoo la isticmaalayo codsigan aad ka HTC in Nokia, Samsung iyo telefoonada kale ku wareejin karo xogta. Waxaa ka dib soo celin karaa in aad telefoon kasta oo kale oo aad gurmad qalab HTC adiga oo isticmaalaya awoodo Wondershare MobileTrans iyo.
Waa 100% Secure iyo codsiga wareejinta xogta halista lacag la'aan ah halkaas oo ay xogta la wareejiyo oo badbaadiyey si fudud. Waxaad si aaladaha kale ee aad ku wareejin karaa Xiriirada, Messages, Videos, Photos, Audio, abuse call iyo Apps aad ka qalab HTC aad.
Kaabta iyo Soo Celinta aad telefoon HTC isticmaalaya Wondershare MobileTrans:
Talaabada 1: Burcad MobileTrans ku on your computer:
Ka dib markii la rakibey lagu daahfuri MobileTrans ku on your computer, oo kaabta la xusho oo soo celiyo hab arjiga ku MobileTrans. Guji "kaabta" iyo bilowdo.
Talaabada 2: Isku aad HTC in computer u gurmad marka hore:
In tallaabadan, waa in aad ku xidhan telefoonka aad rabto in aad dib ilaa your computer, files xusho oo aad rabto in aad dib oo guji "bilaaban nuqul". Dhammaan files kuwaas oo la taageeray doonaa in aad computer, aad hadda ama mar dambe iyaga soo celin kara si aad telefoon kale.
Talaabada 3: Soo Celinta files gurmad aad HTC telefoonka ama telefoon cusub
Tani waa tallaabo la soo dhaafay in la soo celiyo files aad, aad ilaa ay taageereen. Wixii dib u soo celinta aad u leeyihiin in ay sii Homepage iyo hadda xirmaan telefoonka aad rabto in aad dib si ay u gudbiyaan. Dooro "celin" mode on codsigaaga user interface dooro dib faylasha aad rabto in la soo celiyo oo dibna riix on celin dhanka bidix. Software dhameystiri doona dhammaan shaqooyinka iyo kuu sheegi doonaa by on gaadhsiin shaashadda.
> Resource > Android > Sida loo Isticmaalo Manager HTC nidaameed in ay dib ugu soo celi, oo HTC